Laftagareen oo jid-gooyo u dhigtay Goodax Barre | KEYDMEDIA ENGLISH
Laftagareen oo jid-gooyo u dhigtay Goodax Barre
Farmaajo, oo la sheegay inuu ka shaqeynayo siduu qof Hawiye ah uga dhigi lahaa, Af-hayeenka Golaha Shacabka, ayaa rumeysan in walaalka dhanko Hooyo, ee Laftageen, Maxamed Daahir, oo Xawaadle ka soo jeeda uu noqon doono dooq la aamini karo.
BALADWEYNE, Soomaaliya – Madaxweynaha Maamulka Koofur galbeed, Cabdicasiis Laftagareen oo kaashanaya Farmaajo iyo Fahad Yaasiin, ayaa shalay hor istaagay doorashada kuraasta HOP#063 iyo HOP#011, oo qorshuhu ahaa in Talaadadii [Shalay] doorashadoodu ka dhacdo Baladweyne.
Guddiga Hirgalinta Doorashada Hirshabeelle [SEIT], ayaa sheegay in doorashada labada kursi u baaqatay duruufo jira awgood, isla-markaana hal maalin dib loo dhigay, taas oo ka dhigan in mar kale maanta loo ballansan yahay, qabashada doorashada kuraasta..
Keydmedia Online, oo u kuur gashay, sababta ka danbeysay baaqashada doorashada labada kursi, ayaa ogaatay in Laftagareen, uu lahaa masuuliyaadda ugu weyn, maadaama isaga iyo Madaxtooyada Soomaaliya doonayaan in shaqsi ay wataan loo xiro kursiga HOP#063.
Laftagareen, Farmaajo iyo Fahad Yaasiin, ayaa kursiga uu baarlamaankii 10-aad ku fadhiay Cabdullaahi Goodax Barre, la doonaya Maxamed Daahir Aadan Raage oo walaal dhanka Hooyo la’ ah Madaxweynaha Koofur galbeed, si ay uga dhigaan Guddoomiyaha Golaha Shacabka.
Maxamed Daahir Aadan Raage, ayaa shaqsiyaadka gadal ka riixaya, ku wargaliyay in aysan muuqan rajo uu kursiga ku helo, haddii tartan daah-furan la galo, maadaama sagaal musharrax shahaadooyinka tartanka u qaateen baratanka kursiga HOP#063.
Taasi waxa ay sababtay in cadaadis xoog leh, oo ka yimid Baydhabo iyo Muqdisho, la saaro, taliska booliska ee qaabilsan amniga doorashada, kuwaas oo hor istaagay in shalay doorasho ka dhacdo xarunta gobolka Hiiraan ee magaalada Baladweyne.
Farmaajo, oo la sheegay inuu ka shaqeynayo siduu qof Hawiye ah uga dhigi lahaa, Af-hayeenka Golaha Shacabka, ayaa rumeysan in walaalka dhanka Hooyo, ee Laftageen, Maxamed Daahir, oo Xawaadle ka soo jeeda uu noqon doono dooq la aamini karo.
Musharixiinta kursiga HOP#063, waxaa ku jira Wasiirkii hore ee Waxbarashada DF, Cabdullahi Goodax Barre, kaas oo hore ugu fadhiyay, isla-markaana labadii sano ee la soo dhaafay si weyn u mucaaradayay kooxda waqtigu ka dhamaaday.
Goodax, wuxuu hore u xaqiijiyay in Madaxweyne ku xigeynka Hirshabeelle, uu doonayo, in qaar ka mid ah kuraasta taalla Hiiraan loo xiro shaqsiyaad gaar ah, hayeeshee, Dabageed, ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay hadalkaas.
Illa hadda, 246 kursi oo Golaha Shacabka ah ayaa la doortay, kuwaas oo 51 ka mid ah haween yihiin, kuraastaas, waxaa ka mid ah afar kursi oo FIEIT hakisay doorashadooda, 29 kursi ayaana baaqi ka ah 275 kursi ee Aqalka hoose.